Olee otú Jiri VLC dị ka a Video Editor?
Anyị niile n'anya na-ekiri videos site VLC ọkpụkpọ ma olee otú ọtụtụ ndị ị na-eji VLC n'ezie? Ọ bụrụ na ị na-eji VLC si ike dum, ị n'ezie e tụrụ site ihe ọ nwere ike ime. Otu n'ime ọrụ nke VLC bụ na ọ pụrụ okpukpu abụọ elu dị ka a video nchịkọta akụkọ kwa.
VLC bụ ike na ihe mgbasa ozi ọkpụkpọ software na ọ bụghị naanị na arụ orụ di gị mgbasa ozi faịlụ ma na-enye arụmọrụ nke edezi software. Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ike dị ka adịchaghị larịị edezi software maka nkezi ọrụ, ọ na-eme ọrụ. Ị nwere ike bee, jikota, tinye mmetụta na ike fun videos. Ebe a na-atọ bụ isi edezi functionalities nke VLC
Ugbu a, Bugharia mma bụ bara uru dị ka dị iche iche na ngwaọrụ na-eji weghara videos. Mgbe suing camcorder ma ọ bụ ekwentị, na video nwere ike dekọrọ na Eserese ịke ma na-akpọ otu video on PC ga-egosi na ọ na ihere 90 mmụọ ozi. N'ihi ya, ga-bugharia-eme ka ọ watchable.Here bụ otú ị nwere ike bugharia video na kọmputa gị:
1. Open faịlụ na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-aga ngwaọrụ. N'okpuru ngwaọrụ emeghe mmetụta na nzacha.
2. Mgbe ndị na mkparịta ụka igbe emepe, gaa Video mmetụta taabụ, gaa na ịgbanwe na nne Mmetụta ya. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị adiana ogo dabere na nke ugbu a nghazi nke video. Ị nwere ike bugharia video site 90-ogo counter elekere ma ọ bụ gaa n'aka nri.
3. Ọ bụrụ na ị chọrọ bugharia site akụkụ dị iche iche, nke bụ obere ma ọ bụ ihe karịrị 90 ogo, i nwere ike iji taabụ jiometrị.
4. Ugbu a, video ga-egwuri ụzọ i bu n'obi na.
The n'elu nzọụkwụ bụ otu n'ihi na ma Mac na Windows version nke VLC ezie na interface nke Mac bụ ubé dị iche iche.
Ịcha a video bụ isi, akụkụ nke edezi na VLC na-enye gị ezi video ọnwụ arụmọrụ. Otu nkezi ọrụ nwere ike ibelata akụkụ nke a video. Ị nwere ike bee mmasị akụkụ nke video na-azọpụta ma ọ bụ ịkọrọ ya enyi na ezinụlọ anyị. Lee ndị na usoro na ịcha video iji VLC:
1. Mepee video ị chọrọ bee na-aga ele menu na-emeghe Advanced njikwa.
2. ịnyagharịa ka akụkụ ị chọrọ ebipụ. Ozugbo ị bụ amalite nke video, pịa na ndekọ bọtịnụ.
3. Ugbu a-egwu video ma ọ bụ ịkpali ya etiti site etiti ruo mgbe ị na-eru ọgwụgwụ. Ugbu a pịa red button ọzọ Ka ịkwụsị ndekọ. Gị video ga-azọpụta My Videos nchekwa ma ọ bụ ndabere video Chekwa nchekwa na kọmputa gị.
Niile nzọụkwụ bụ otu si ma windows na Mac version nke VLC ọkpụkpọ.
Ị nwere ike jikota multiple faịlụ n'ime otu ugboro iji VLC. Otú ọ dị, ị ga-achọ faịlụ na otu format tupu merging ha. Ị nwere ike iji N'ọgba nhọrọ nke VLC iji tọghata faịlụ ka otu usoro. Lee ndị nzọụkwụ ị ga-eso na jikota abụọ ma ọ bụ karịa faịlụ n'ime otu ugboro.
1. Launch VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-aga Media NchNhr. Site menu, pịa Open Multiple faịlụ.
2. Na-esote window, gaa na File taabụ na pịa Tinye ka ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ ka jikota. N'ihu na-agbakwunye jide n'aka niile faịlụ nwere otu usoro. -Etinye ha na usoro ụzọ ị chọrọ igwu ha.
3. Ugbu a, gaa Play na-emeghe dobe ala ndepụta na pịa Ntụgharị ịzọpụta faịlụ.
Usoro a bụkwa otu ihe ahụ ma Windows na Mac ịwa usoro ma Mac nwere ya interface.
Top 10 Videos Intros na Outros eso
Olee otú dezie M4V Video Files na Windows / Mac
> Resource> Video> Olee otú Jiri VLC dị ka a Video Editor?